သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း လက္ခဏာ ၅ ရပ် - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း လက္ခဏာ ၅ ရပ်
သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း လက္ခဏာ ၅ ရပ်
Apann Pyay 5:20 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
သင့်ဘော်ဒါတစ်ယောက် မနေ့ညက ကောင်မလေးချောချောလေးနဲ့ တူတူ အိပ်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ သိသာလွန်းနေမှာပါ။ လေလေး တစ်ချွန်ချွန်နဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ပြုံးနေမှာပါ။ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သင့်ကိုလာပြောပြနေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် မိန်းမတွေ ဆိုရင်ရော?? သင်ဘားမှာတွေ့တဲ့ မိန်းကလေး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်မလေး၊ Gym က ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး၊ သူတို့ မနေ့ညက ဆက်ဆံခဲ့ရင် သင် ဘယ်လို သိပါမလဲ?? ဆံပင်ကောက်နေတာလား?? Bite Mark တွေလား?? အဲဒီ ရုပ်ရှင်ထဲက လက္ခဏာတွေဟာ တကယ်တော့ မှားနေပါသေးတယ်။ မိန်းမတွေဟာ ခန့်မှန်းရ ခက်လွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ မနေ့ညက ကံကောင်းခဲ့ကြောင်း သေချာတဲ့ လက္ခဏာ ၅ ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. သင့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းပါတယ်
လိင်ကိစ္စမှာ တက်ကြွလေလေ၊ သူမကိုယ်ခန္ဓာက Pheromone တွေ များများထွက်လေပါ။ Pheromone ဆိုတာမိန်းကလေးတွေက ထုတ်ပေးတဲ့ သင့်ကို မရိုးမရွ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အနံ့ပေးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါ။ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေဟာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ကြွစေလာပြီး သင် သူမအနားကပ်လိုက်လို့ ကိုယ်နံ့ရတာနဲ့ သင့်ကိုယ်ထဲက အင်ဂျင်တွေ ခုတ်လာရင်တော့ သူမ လိင်ကိစ္စရထားတာ မကြာသေးပါဘူး။
၂. သူမ ပိုပျော်နေပါတယ်
လိင်ဆက်ဆံမှု များလာလေလေ၊ ပျော်ရွှင်မှု မြင့်တက်လာလေလေပါ။ လူ ၁၅၀၀၀ လောက်ကို ကောက်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ တစ်ပါတ်ကို နှစ်ကြိမ်ကနေ သုံးကြိမ် လိင်ဆက်ဆံသူတွေဟာ လုံးဝ မဆက်ဆံသူတွေထက် ပျော်ရွှင်မှု ၅၅ ရာနှုန်း ပိုပါတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေထက် လိင်ပိုဆက်ဆံရကြောင်း သိနေရုံနဲ့ကို ပိုပျော်ပါတယ် တဲ့။
၃. ပုံမှန်ထက် ပိုလှနေပါတယ်
လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားပြီး သွေးစီးဆင်းနှုန်း ပိုများလာပါတယ်။ ပါးလေးတွေ ပန်းရောင်သမ်းလာပြီး အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းလယ်ဗယ် မြင့်လာပါတယ်။ တခြားဟာတွေ တူနေရင် ပါးလေးတွေ သွေးရောင်တောက်နေတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေကို ပိုလှတယ်လို့ ထင်စေပါတယ်။
လိင်ပြီးဆုံးခြင်း ရထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆက်ဆံပြီးပြီးခြင်း Prolactin ဟော်မုန်း ၃၀ ရာနှုန်း ပိုတိုးလာပြီးနောက်တစ်နေ့နေ့လည်မှာ နောက်တစ်ခါ ထပ်တိုးလာပါတယ်။ Prolactin ဟော်မုန်းဟာ အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူမ နေ့လည်နေ့ခင်း အိပ်ဖို့ ထွက်သွားရင်တော့ မနေ့ညက ရခဲ့တဲ့ စည်းစိမ်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅. လိုအပ်ချက်တွေ နည်းသွားပါတယ်
လူတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ လိင်ကိစ္စဟာ လူတွေကို သံယောဇဉ်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးတဲ့ Oxytocin ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ Oxytocin တိုးလာတာနဲ့ သူမလဲ သံယောဇဉ် ပိုရှိလာသလို ခံစားလာစေရမှာ ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုပို စိတ်ချလာလို့ အမြဲ တွယ်ကပ်မနေစေတော့ပါဘူး။ Oxytocin ဟာ မိန်းမတွေကို လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ သံသယ နည်းစေတဲ့အတွက် အစစ်ဆေးပိုတာ၊ သင့် စကားလုံးတိုင်း၊ ဖုန်းပြောတိုင်း လိုက်စစ်ဆေးနေတာမျိုး လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး
သူမ မနညေ့က လိငျဆကျဆံခဲ့ကွောငျး လက်ခဏာ ၅ ရပျ
သငျ့ဘျောဒါတဈယောကျ မနညေ့က ကောငျမလေးခြောခြောလေးနဲ့ တူတူ အိပျခှငျ့ရခဲ့ရငျတော့ သိသာလှနျးနမှောပါ။ လလေေး တဈခြှနျခြှနျနဲ့ အကွောငျးမရှိ အကွောငျးရှာ ပွုံးနမှောပါ။ ပွီးတော့ အတှအေ့ကွုံကို မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ သငျ့ကိုလာပွောပွနမှောပါ။
ဒါပမေယျ့ မိနျးမတှေ ဆိုရငျရော?? သငျဘားမှာတှတေဲ့ မိနျးကလေး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျကောငျမလေး၊ Gym က ခြိတျတိတျတိတျဖွဈနတေဲ့ ကောငျမလေး၊ သူတို့ မနညေ့က ဆကျဆံခဲ့ရငျ သငျ ဘယျလို သိပါမလဲ?? ဆံပငျကောကျနတောလား?? Bite Mark တှလေား?? အဲဒီ ရုပျရှငျထဲက လက်ခဏာတှဟော တကယျတော့ မှားနပေါသေးတယျ။ မိနျးမတှဟော ခနျ့မှနျးရ ခကျလှနျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမ မနညေ့က ကံကောငျးခဲ့ကွောငျး သခြောတဲ့ လက်ခဏာ ၅ ခု ရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. သငျ့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျလှနျးပါတယျ
လိငျကိစ်စမှာ တကျကွှလလေေ၊ သူမကိုယျခန်ဓာက Pheromone တှေ မြားမြားထှကျလပေါ။ Pheromone ဆိုတာ မိနျးကလေးတှကေ ထုတျပေးတဲ့ သငျ့ကို မရိုးမရှ ဖွဈစနေိုငျတဲ့ အနံ့ပေးတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှပေါ။ အဲဒီ ပစ်စညျးတှဟော ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျကို စိတျကွှစလောပွီး သငျ သူမအနားကပျလိုကျလို့ ကိုယျနံ့ရတာနဲ့ သငျ့ကိုယျထဲက အငျဂငျြတှေ ခုတျလာရငျတော့ သူမ လိငျကိစ်စရထားတာ မကွာသေးပါဘူး။
၂. သူမ ပိုပြျောနပေါတယျ
လိငျဆကျဆံမှု မြားလာလလေေ၊ ပြျောရှငျမှု မွငျ့တကျလာလလေပေါ။ လူ ၁၅၀၀၀ လောကျကို ကောကျခဲ့တဲ့ စဈတမျးတဈခုမှာ တဈပါတျကို နှဈကွိမျကနေ သုံးကွိမျ လိငျဆကျဆံသူတှဟော လုံးဝ မဆကျဆံသူတှထေကျ ပြျောရှငျမှု ၅၅ ရာနှုနျး ပိုပါတယျ။ လူတှဟော ကိုယျ့ပါတျဝနျးကငျြကသူတှထေကျ လိငျပိုဆကျဆံရကွောငျး သိနရေုံနဲ့ကို ပိုပြျောပါတယျ တဲ့။
၃. ပုံမှနျထကျ ပိုလှနပေါတယျ
လိငျဆကျဆံစဉျမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားကွီး ဖွဈပါတယျ။ ကွှကျသားတှေ ပွလြေော့သှားပွီး သှေးစီးဆငျးနှုနျး ပိုမြားလာပါတယျ။ ပါးလေးတှေ ပနျးရောငျသမျးလာပွီး အီစထရိုဂငျြဟျောမုနျးလယျဗယျ မွငျ့လာပါတယျ။ တခွားဟာတှေ တူနရေငျ ပါးလေးတှေ သှေးရောငျတောကျနတောဟာ ကြှနျတျောတို့ ယောကျြားတှကေို ပိုလှတယျလို့ ထငျစပေါတယျ။
လိငျပွီးဆုံးခွငျး ရထားတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ဆကျဆံပွီးပွီးခွငျး Prolactin ဟျောမုနျး ၃၀ ရာနှုနျး ပိုတိုးလာပွီး နောကျတဈနနေ့လေ့ညျမှာ နောကျတဈခါ ထပျတိုးလာပါတယျ။ Prolactin ဟျောမုနျးဟာ အိပျခငျြစိတျကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူမ နလေ့ညျနခေ့ငျး အိပျဖို့ ထှကျသှားရငျတော့ မနညေ့က ရခဲ့တဲ့ စညျးစိမျတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၅. လိုအပျခကျြတှေ နညျးသှားပါတယျ
လူတှမှော တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သံယောဇဉျဖွဈနဖေို့ လိုပါတယျ။ လိငျကိစ်စဟာ လူတှကေို သံယောဇဉျဖွဈအောငျ ကူညီပေးတဲ့ Oxytocin ဟျောမုနျး ထုတျပေးပါတယျ။ Oxytocin တိုးလာတာနဲ့ သူမလဲ သံယောဇဉျ ပိုရှိလာသလို ခံစားလာစရေမှာ ဖွဈပွီး သငျ့ကိုပို စိတျခလြာလို့ အမွဲ တှယျကပျမနစေတေော့ပါဘူး။ Oxytocin ဟာ မိနျးမတှကေို လူမှုဆကျဆံရေးမှာ သံသယ နညျးစတေဲ့အတှကျ အစဈဆေးပိုတာ၊ သငျ့ စကားလုံးတိုငျး၊ ဖုနျးပွောတိုငျး လိုကျစဈဆေးနတောမြိုး လုပျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။